UKUGCINA IIBHLOKO ZEGUMBI LEEHOTELE 101 - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Ungayigcina njani iBhloko yeeGumbi zehotele
Nantsi yonke into oyifunayo malunga nokugcina amagumbi eendwendwe zakho. iStock Ukuhlaziywa ngoJulayi 13, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Ukuba uneendwendwe ezingaphandle kwedolophu emtshatweni wakho, ziya kudinga indawo yokuhlala, kuba ngokuqinisekileyo awufuni ukuba zitshaye isuti yomtshato! Iibhloko zehotele kwimitshato zivumela iindwendwe ukuba zihlale kwihotele enye (okanye kwiihotele ezimbalwa), ezenza izinto zibe lula njengokucwangcisa kunye nokuhamba. Kwaye kumnandi ngakumbi kwiindwendwe zakho, ezinokuthi zifune ukuxubana kunye nokuzonwabisa emva komthendeleko.Ukugcina ibhloko yegumbi lasehoteleEyona ndlela yokuqinisekisa ukuba iindwendwe zakho zinendawo yokuhlala kufutshane nokwamkela kwakho. Kwaye iihotele zihlala zikunika isaphulelo kumgangatho wegumbi onokuthi ugqithisele kwiindwendwe zakho. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi ukuba yenzeke.
Uwavimba njani amagumbi ehotele emtshatweni?
Kukho amanqaku aphambili ekufuneka uwagcine engqondweni ngaphambi kokuya kuwogcina amagumbi ehotelekumtshato wakho: ukusondela kwindawo yokwamkela kwakho, izinto eziluncedo kunye nenqaku lamaxabiso. Ukuba kunokwenzeka ukuba utshatele kwindawo eneendawo zokuhlala, qala apho. Buza umphathi wendawo malunga neerhafu zamagumbi kunye nesaphulelo esinokubakho seendwendwe zakho ezigcinwe kwangoko. Kuya kufuneka ugcine iibhloko zamagumbi ehotele ubuncinci iihotele ezimbini ukuba unomtshato oya kuyo kunye neendwendwe ezininzi zangaphandle kwedolophu, utshata ehotele enamagumbi anexabiso elikhethekileyo okanye uneyona enkulu kune- Uluhlu lweendwendwe oluphakathi (ngaphezulu kwe-140).
Ukugcina ibhloko yehotele yeendwendwe zakho, uya kufuna ukunciphisa ukhangelo lwakho kwiihotele ezimbini okanye ezintathu emva koko unike umntu ngamnye umnxeba. Xa ufowunela ukugcina, nika ihotele imihla olindele ukuba iindwendwe zakho zibekhona, kunye nazo naziphi na izicelo ezizodwa onethemba lokuba ziya kukunceda uzizalisekise (njengokuwisa iingxowa ezamkelekileyo emnyango, okanye ukuthutha ukuya nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya) . Ukuqala, bhukisha inani elincinci lamagumbi kwaye ungeze amanye kamva xa kufuneka njalo. Ngale ndlela, uthintela ukujongana nezohlwayo ukuba amagumbi awabekwanga. Ngaba kuvakala ngathi kunzima? Zisindise itoni yexesha ngokusebenzisa UMcwangcisi wehotele , Inkulumbuso kwigumbi lethu lokubhukisha ihotele. Ngabacwangcisi abaqinisekisiweyo abaqhayisa ngamava amashumi eminyaka ngamava oshishino kwaye ngokudibeneyo bathetha iilwimi ezingama-28 ezahlukileyo (ingcebiso, icebiso lakho kubantu abatshatayo abaya emtshatweni), uMcwangcisi wehotele yivenkile yakho yokumisa kwindawo yokubhukisha ehotele yeqela lakho — siza kuchaza izibonelelo kunye nendlela kamva.
Imifanekiso yeNyoka / iShutterstock.com
Uthetha-thethana njani ngokwemigaqo yesivumelwano ngebhlokhi yehotele?
Ngaba ukhetha ukuyenza ngokwakho? Nje ukuba ufumane ibhloko yegumbi elisebenza kumtshato wakho, kuya kufuneka usayine ikhontrakthi yokugqibezela ukubhukisha. Kukho amagama athile aphambili oya kuthi uwaqonde xa uphonononga imigaqo yekhontrakthi yebhloko yehotele. Funda ikhontrakthi ngononophelo ngaphambi kokuba utyikitye kwaye ujonge la magatya:
Igatya leShrinkage elivumelekileyo
Kuthetha ukuthini oku: Eli nani libhekisa kwipesenti yamagumbi avunyelweyo ukuba angabhukishelwa.
Ipesenti yethagethi: Phakathi kweepesenti ezili-10 ukuya kwezi-20. Intsingiselo, ukuba ubhukishe amagumbi angama-20 kodwa u-2 ukuya ku-4 ungabhukiswanga, awuyi kohlwaywa ngentlawulo.
Ireyithi yokutsala okanye ukuzibophelela okuncinci
Kuthetha ukuthini oku: Eli nani libhekisa kwipesenti yamagumbi ekufuneka ezaliswe ukuze kuthintelwe ukuhlawulwa komrhumo.
Ipesenti yethagethi: Phakathi kweepesenti ezingama-80 ukuya kuma-90. Umzekelo. Oku kuthetha ukuba ukuba awuyikhuphi ubuncinci bemali yamagumbi ekuvunyelwene ngawo, uya kuba netyala ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 zebhloko yegumbi.
Uthintelo Igatya okanye Resell Igatya
Kuthetha ukuthini oku: Ihotele kufuneka izame ukubhukisha amagumbi angasetyenziswanga kwibhlokhi yakho ukuze ungabi noxanduva lwazo ukuba kamva zithengiselwa abanye abathengi. Ngamafutshane: Akufanele uhlawulele amagumbi ahlawulelwa ezinye iindwendwe.
Ungalichaza njani ulwazi lwakho lwehotele malunga neendwendwe?
Eyona ndlela yokunxibelelana nolwazi lwakho lwebhloko yehotele kukuyifaka kwiwebhusayithi yakho yomtshato. Ngale ndlela, zonke iindwendwe zakho ziya kwaziswa kakuhle kwaye zinokucofa ngokulula ukuze ufunde ngakumbi malunga neendawo zokuhlala ezikhoyo. Ukuba uneendwendwe ezivela ngaphandle kwedolophu, ikwayinto entle ukubandakanya ulwazi olongezelelekileyo malunga nendlela yokuya kwindawo okanye ukuba ukuhanjiswa okuvela ehotele kuya kubonelelwa. Kwakhona, cinga ngokubandakanya ulwazi loqhakamshelwano lomcwangcisi wakho womtshato okanye ilungu losapho kwindawo yakho ukuze iindwendwe zikwazi ukufikelela kubo ngokuthe ngqo, ukuba banemibuzo malunga nemikhombandlela okanye indawo yokuhlala.
Sidinwe kukucinga nje ngazo zonke iinkcukacha, ke silapha ukunceda. Simanyene noMcwangcisi wehotele kuzo zonke iimfuno zakho zokubhukisha. UMcwangcisi wehotele kukuvumela ukuba ukhangele zonke iihotele eziphambili ezikufutshane nendawo yakho, ucebise ngendawo yokuhlala, kwaye ikuncede uthethathethane ngexabiso elikhulu kwaye ugcine onke amagumbi akho kwindawo enye. Konke okufunekayo yimibuzo elula yolwazi kwaye utshatisiwe nengcali yendawo enokukunceda kwinqanaba ngalinye lendlela.
enkosi qaphela iindwendwe zomtshato
nini ukuthatha iifoto zokuzibandakanya
iingoma zomdaniso wonyana ongumama othandwayo
izimvo zesipho somtshato wesibini esimnandi
ubungakanani bombhoxo oqhelekileyo